I-Beach Sunset Villa 150M ukusuka e-Ocean - I-Airbnb
I-Beach Sunset Villa 150M ukusuka e-Ocean
Paúl do Mar, Madeira Island, i-Portugal
I-Villa Natura iyi-villa yomklami etholakala amamitha angu-150 kuphela ukusuka olwandle, ezungezwe amasimu obhanana nezinye izihlahla zezithelo enengadi yayo eluhlaza enikeza ukuvaleleka, ukuthula nokuphumula.
I-Villa itholakala e-Paul Do Mar - ogwini oluseningizimu-ntshonalanga yeSiqhingini, phakathi kwemvelo kuleli dolobha elinomlando wokudoba elibhekwa njengelanga futhi elishisa kakhulu ogwini lwase-Calheta.
I-Villa ibhekene neningizimu-ntshonalanga futhi ibonakala kahle kakhulu ekukhanyeni kwelanga, inikeza ukubukeka okuhlaba umxhwele kwe-Atlantic, emaphandleni, ogwini, edolobhaneni elingezansi nokushona kwelanga okumangalisayo.
Isanda kwakhiwa ngesitayela sesimanje esihlanganisa izinto zemvelo kuyo yonke indawo iyinhlanganisela yemiklamo yesimanje nezinto zemvelo. I-villa inamatshe namatshe avela e-Azores, e-Cape Verde, e-Madeira nasezwekazini, izindawo zokhuni zekhwalithi ephakeme nezindawo ezibanzi zengilazi ezinikeza ukukhanya kwelanga okwanele ngaphakathi. I-villa inovulande obheke olwandle, ithala, ama-balcony kanye nezindawo zengadi ezimboziwe ezinomthunzi omningi. Kunendawo yokosa inyama yangaphandle enovulande omkhulu okhanyiselwe indawo yokudlela evulekile kanye neshawa yangaphandle ukuze uzipholise phakathi nezinsuku ezishisayo noma ususe usawoti ngemva kokubhukuda okuqabulayo olwandle. Indawo yaphansi inendawo yokuphumula ene-flat-screen TV kanye nokufinyelela kwe-inthanethi okungenazintambo okusheshayo kanye nedeski elisebenzayo le-laptop. Eceleni kwegumbi lokuphumula yindawo yokudlela evulekile exhunywe nekhishi. Esitezi sokuqala kunamakamelo okulala angu-2 ahamba phambili angu-4 esewonke anamagumbi okugezela angaphakathi, elinye elinobhavu osekhoneni kanti elinye lineshawa engena ngezinyawo. Ikamelo lokulala ngalinye line-balcony yalo yangasese kanye nethala elinokubukwa kolwandle nezintaba.
Inombolo yepholisi: 113847/AL